Mmemme osooso ọnwụ: Ọ na-arụ ọrụ? Chọpụta ebe a!
Nri Arụ Ọrụ: Ntụziaka maka ndị na-achọghị ịpụ nri!
Ngwaahịa	 26 March 2018
Nri kwesịrị ekwesị dị mkpa maka ndị chọrọ ida. Ọbụnadị maka ndị na-eji ngwaahịa ịbelata ibu, mgbanwe nri, ọbụlagodi na ọ dị obere, dị mkpa iji mee ngwangwa, bulie nsonaazụ yana kwalite oke ibu dị mma. Ma inwe nri kwesịrị ekwesị na -esikarị ike. Ọ bụ kpọmkwem inyere gị aka na usoro a ka emepụtara Mmemme Mgbapụta Ibu Ibu. Anyị achịkọtara na post a ozi niile gbasara ya. Lelee:
Ebee ka ịzụta Mmemme Ọnwụ Ọsọ Ngwa?
Ịzụta Mmemme Ọnwụ Ibu Ngwa dị mfe ma ị nwere ike ime ya ugbu a. A na -ere mmemme a na saịtị ya, yabụ nweta ya naanị https://quitoplan.com.br/pae-2/, họrọ usoro ịkwụ ụgwọ wee tinye adreesị ozi -e dị irè.
Kedu ihe ị ga -azụta ugbu a? Pịa bọtịnụ dị n'okpuru ma a ga -atụgharị gị gaa na Weebụsaịtị. Iji chọpụta ihe ndị ọzọ tupu ịzụrụ ihe, gụọ post anyị ruo na njedebe.
[junkie-alert style = ”red”] Anyị bụ webụsaịtị nri na ahụike nwere akụkọ na ya. A ga -atụgharị gị gaa na saịtị gọọmentị Pịa ebe a [/ junkie-alert]
Ebe ahụ enwere nchekwa n'ezie? Enwere m ike ịtụkwasị obi?
Ee, ị nwere ike ịtụkwasị obi ma jiri udo nke obi zụọ ihe, ebe saịtị a dị nchebe n'ezie, a ga -echekwa data nkeonwe gị na nke ego gị.
Ọ bụrụ na ndị mepụtara ngwaahịa a ga -ana ọnụ ahịa mbụ nke ihe niile agụnyere na atụmatụ ahụ, gbakwunyere ọnụ ahịa ego ị ga -enweta na ịzụrụ ihe, ị ga -akwụrịrị ego ruru $ 746,49. Agbanyeghị, ndị okike ga -enye gị nnukwu ego 2 n'efu na ụgwọ maka naanị ihe mmemme a Oge 12 nke BRL 19,78 ma ọ bụ R $ 197,00 na ego.
Pịa ebe a ịzụta.
Kedu ka m ga -esi akwụ ụgwọ?
Iji kwụọ ụgwọ maka ngwaahịa a, ị nwere ike họrọ kaadị akụ ma ọ bụ kaadị kredit. N'ihe gbasara kaadị ahụ, saịtị ahụ na -anabata akara ndị bụ isi.
Kedu ihe bụ Mmemme ngwangwa Loss Weight? Kedu ka o si arụ ọrụ?
Ndị a bụ mmemme nwere atụmatụ na menus nke na -enyere aka mee ka ịbelata ibu gị na oke ọkụ na -ere ọkụ. Mmemme a ga-eduzi gị na ebumnuche gị site na menus ndị emebere eme na nri dị ụtọ na iche iche.
Olee uru ọ pụrụ iweta?
Atụmatụ: Mụta ịgbaso atụmatụ dị irè na -enweghị mmetụta dị ka ịwakpo oke ehi;
Nchịkọta nhọrọ: Chọpụta ngwakọta nri kacha mma;
Atụmatụ ntuziaka: Mụta ime atụmatụ, ọkachasị n'ụbọchị ndị ọrụ juru;
Ezi ntụziaka dị mfe: Nhọrọ dị mma maka ndị nwere obere oge;
Belata usoro: Nweta nsonaazụ ngwa ngwa.
Ihe mmemme a dabara maka onye ọ bụla chọrọ ifelata ngwa ngwa yana ahụike. Karịsịa maka:
Onye chọrọ inwe nsonaazụ ngwa ngwa;
Ndị chọrọ nkụ abụba;
Onye chọrọ ibelata ihe;
Ụmụ nwanyị chọrọ inwekwu ntụkwasị obi na bikini.
Mmemme ngwangwa oke ibu ọ na -arụ ọrụ?
Ọbụghị naanị na ọ na -arụ ọrụ, ọ ga -eweta nsonaazụ ịtụnanya ị na -echetụbeghị. Ọ na -arụ ọrụ n'ihi na ọ na -arụ ọrụ na igodo mbelata ahụ ike dị mma, nke bụ nri, na -enweghị mkpa maka nri na -egbochi oke. Site na mmemme ngwangwa nke ibu ibu, ọbụlagodi ndị nwere obere oge nwere ike iri nri n'ụzọ ziri ezi, nke gosipụtara na nha.
Ọtụtụ ndị anwalela mmemme a wee nweta nsonaazụ dị egwu.
Kedu oge m ga-enweta nsonaazụ?
Enwere ike ịhụ nsonaazụ n'ime izu ole na ole mbụ, ha ga -adịgasị iche site na mmadụ gaa na onye ọzọ, ebe ọ bụ na akụkụ nke ọ bụla dị iche.
Kedu ihe m ga-enweta?
Site na ịzụrụ Mmemme Ọnwụ Ibu Ngwa ị ga -enweta:
Atụmatụ nri ụbọchị 30
Nri maka ụbọchị 30
Ntụziaka 201 maka ndụ kwa ụbọchị
Site na ịzụrụ ihe, ị ka ga -enweta ego ego dị ịtụnanya 2. Ha bụ:
Otu esi eri nri na mpụga ụlọ wee nọgide na -ebelata;
Ntụziaka nnọchi: maka ndị nwere mmachi nri.
Ọ ga -adịrị m mma?
Ee! Emepụtara mmemme ngwangwa ibu ibu iji mee ka ndụ dịrị ndị chọrọ ifelata mfe, ọbụlagodi na onye ahụ nwere obere oge na obere ọzụzụ.
Ọ na -amachi oke?
Mba, atụmatụ a dị nnọọ iche. Ọ ga -eme ka ị nwee nri na -edozi ahụ nke ọma na -enweghị imepụta oke mgbochi.
Ndị ọkachamara na -edozi ahụ ọ na -akwado ya?
Ndị ọkachamara, ndị ọkachamara n'ihe oriri na -edozi ahụ pụrụ iche n'ịbelata oke ahụ ike mepụtara atụmatụ ndị dị na Mmemme Loss Loss Weight.
Kedu ka m ga -esi nweta akwụkwọ ahụ?
A ga-eziga ihe na e-mail ị nyere mgbe ịzụrụ ihe. Cheta na a na -eziga ihe ahụ mgbe nkwenye nke ịkwụ ụgwọ yana ịkwụ ụgwọ site na mwepu ụlọ akụ nwere ike were awa 72 ka ekwenye. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnata ngwa ngwa, ihe kachasị mma bụ ịzụrụ ihe site na kaadị kredit, a ga -ezipụ nkwenye n'ime nkeji ole na ole.
Ọ nwere onye nwere ike?
Ee! Onye ọ bụla nwere ike ime mmemme ahụ. Ọ bụ ndị ọkachamara mepụtara ya na maka nke ahụ, ọ na -enye nri niile mmadụ kwesịrị ifelata na -enweghị ahụike. Ọ nwekwara akwụkwọ ntụzịaka nke na -akụzi etu ndị mmadụ nwere ihe mgbochi nri dịka ekweghị ekwe lactose, dịka ọmụmaatụ, nwere ike isi mezie usoro nri maka mkpa ha.
Ị nwere mmasị, mana ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara mmemme a? Hapụ okwu gị! Ka anyị nyere gị aka.
Igwe hydration ụlọ: Hụ ndị kachasị mma!
Post-mgbatị ahụ nri
Probiotics: Kedu ihe ha bụ? Kedu nri m na-ahụ? Olee uru ọ bara?
Ọkụ kwa ụbọchị: Ọ B WOR ỌBUR??
Chocolate Vegan: Mara ebe ị ga-ahụ na nri ị ga-arụ n'ụlọ!